पत्नीले पठाइन् आफ्नो फोटो, देख्नेबित्तिकै पतिले मागे डिभोर्स, के थियो फोटोमा ? – Superhit News
Hit news First
पत्नीले पठाइन् आफ्नो फोटो, देख्नेबित्तिकै पतिले मागे डिभोर्स, के थियो फोटोमा ?
June 10, 2018 superhit news0Comments
एजेन्सी। पति केही दिनको लागि बाहिर गएका थिए । अचानक उनलाई आफ्नी पत्नीलाई देख्न मन लाग्यो । उनले पत्नीलाई म्यासेज गरेर फोटो मागे । पत्नीले पनि आफ्नो फोटो खिचेर पठाइन् । पतिले त्यो तस्वीर देख्नासाथ रिसले आगो भए । तत्कालै उनले म्यासेज गरेर डिभोर्स मागे ।
अहिले यो फोटो सामाजिक संजालमा चर्चाको विषय बनेको छ । अहिले यो फोटो हेर्नेको संख्या करोड पुग्न थालेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो त्यही तस्वीर हो जुन तस्वीर हेरेपछि पति जोनले पत्नीसँग डिभोर्स मागेका थिए । जोन कामको सिलसिलामा बाहिर गएका थिए । उनले होटलबाट पत्नीलाई पटक पटक फोन गरे तर फोन उठेन । लामो समयपछि पत्नीले फोन उठाइन् । त्यसपछि जोनले बेडरुममा खिचेको फोटो मागे ।
पत्नीले पनि तत्कालै आफ्नो फोटो खिचेर पठाइन् । फोटो देखेर पनि खुसी भए । तर लगत्तै उनले बेडको छेउमा केही अनौठो देखे । जुन बेडमा पत्नी बसेकी थिइन् त्यो बेडको तल एउटा हात देखिएको थियो । यही कारण पतिले डिभोर्स मागेका थिए । फोटो देख्नासाथ जोनले बुझे कि उनकी पत्नी बेडरुममा अरु कोहीसँग छिन् ।
← यस्ता संकेत देखिए भने सावधान ! मृगौला क्यान्सर हुनसक्छ
गलत साइजको ब्रा लगाउँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर →
माइग्रेन के हाे ? के गर्ने, के नगर्ने ? यस्ताे छ प्राकृतिक उपचार बाट यसरि छुटकारा पाउन सकिन्छ
यस्ता छन् तीनमहिने सुइका ३ साइड एफेक्ट : डाक्टर हरु के भन्छन् ?
१५ मिनेटका ३ एक्सरसाइज
यस्तो छ चिकित्सकको सुझाब , बर्डफ्लुका बेला कुखुराको मासु खाए के हुन्छ?
महिनावारी गडबढी हुन्छ ? यस्ता उपाय अपनाउनुस…
Categories Select Category slider (23) Technological (1) Uncategorized (25) अन्तरवार्ता (5) अन्तरास्ट्रिय खबर (23) कोरियेन जानकारी (6) खेलकुद (2) ताजा समाचार (35) फिल्मी खबर (2) ब्लग (13) मनोरन्जन (1) राजनिती (17) राष्ट्रिय खबर (93) विचार (33) शिक्षा (3) साहित्य (47) स्वास्थ्य (58)
Copyright © 2019 Superhit News. All rights reserved.